Thuta Music - Page 187 of 204 - News and Media
NLD အမတ်လောင်း ကိုထိုက်ဇော်ရဲ့ ဇနီးရေးတဲ့စာ….
November 23, 2020 by Thuta Music
NLD အမတျလောငျး ကိုထိုကျဇျောရဲ့ ဇနီးရေးတဲ့စာ…. သှားနငျ့တော့…… သှားနငျ့တော့ယောကျကြားရေ ဒီမိုကရစေီခတျေကွီးမှာ ရှငျအခုလိုသှားရလိမျ့မယျ မထငျမိဘူးတျော… ၈၈ကစလို့ ရှငျ့အရငျ ဒီမိုကရစေီရဲဘျောတှေ ရောကျနှငျ့ခဲ့ကွပွီလေ။ ဒီ နိုငျငံ ဒီမိုကရစေီရဖို့ အသကျပေးခဲ့ကွရသူတှဒေုနဲ့ဒေးတဲ့ ခုတော့ ကြုပျကိုယျတှေ့ ပေါ့ ကြုပျ ရငျဘကျကွီးနဲ့ အတှပေ့ေါ့တျော… ကြုပျထငျတာက ဒီမိုကရစေီအပငျလေး ပျေါထှကျလာခဲ့ပွီပေါ့…. ရောငျနီထှနျးပွီပေါ့…. ကိုထိုကျဇျော… အခုတော့ ဘယျနယျ့ဟုတျစ… ဒီမိုရဲဘျောတှပွေောတဲ့ နောကျဆုံးတိုကျပှဲ နှဲးနရေတုနျးပါ့ တျော ခုတော့ရှငျက ကဆြုံးရဲဘျော ကြုပျက မုဆိုးမ လတျလတျဆတျဆတျ မုဆိုးမ ဒီမိုကရစေီ ရဲဘျောရဲ့အိမျသူ ဒီမိုကရစေီမုဆိုးမ ကြုပျဂုဏျယူပါ့မယျတျော…. ဒါပသေိ ကြုပျမကျြရညျတှေ ကနြတော ထိနျးမရဘူး… ဘယျနယျ့ နာလိုကျတဲ့ အသညျး ရကျစကျလိုကျကွပါဘိ… အခု ရှငျ့သားလညျးငိုနတေယျ ကိုထိုကျဇျော … Read more
တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဒီ (၆)ချက်ကို သိထားဖို့လိုတယ်
လက်ရှိချစ်သူ လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဒီ ( ၆ )ချက်ကိုသိထားဖို့လိုတယ် ၁။ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစား … ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားရမယ်။ တကယ်တော့ ငါတို့ ရန်ဖြစ်ကြတာ ခဏတာလေးပါ။ ဒီခဏလေးပြီးရင် အကြာကြီးဝေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ငါတို့ရန်ဖြစ်တာရော၊ ဘာကြောင့်လဲ။ လမ်းခွဲဖို့လောက်ထိရော၊ ဖြစ်သင့်ရဲ့လား။ ဘာတွေကြောင့် ဒီအခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်လာခဲ့လဲ။ ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားမယ်။ ၂။ မှားတဲ့သူ တောင်းပန်ကြေး… ချစ်သူရေ.. ဘယ်သူမဆို ကိုယ်မှားတာကို တာဝန်ယူမှ၊ ဝန်ခံမှ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တို့ ချစ်သူတွေကြားမှာပေ့ါ။ အမှားကိုသိရင် အမှန်ပြင်ရမယ့် သတ္တိ ငါတို့မှာ ရှိရမယ်လေ။ မှားတဲ့သူက အရင်တောင်းပန်ကြေးနော်။ နောက်ပြီး တောင်းပန်တာကိုလည်း လက်ခံကြေး။ ခွင့်လွှတ်ကြေး။ … Read more
ငါးရက်အတွင်းပွေးညှင်းတင်းတိတ်ဝက်ခြံသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ငါးရက်အတွင်းပွေးညှင်းတင်းတိတ်ဝက်ခြံသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်းပွေး၊ညှင်း၊၀က်ခြံ၊တင်းတိတ်များအတွက်အလွယ်ဆုံးနည်း(ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ) ပွေး၊ညှင်း၊တင်းတိတ်၊ဝက်ခြံဖုများအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာပျောက်ကင်းသွားစေမည့်မြန်မာ့ရိုးရာလိမ်ဆေးနည်းလေးကိုရေးသားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကိုအခွံခွါပြီးရေမဆေးပဲထုထောင်းပါ။ဘရန်ဒါကြိတ်စက်ရှိကကြိတ်ပါ။(၂)ကြွေပုဂံတစ်လုံးထဲထည့်ပါ၊သံပုရာသီးတစ်လုံးကိုညှစ်ထည့်ပါ။ (၃)ပွေး၊၀ဲ၊ညှင်း၊၀က်ခြံ၊တင်းတိပ်ပေါက်တဲ့နေရာပေါ်ကိုတစ်နေ့(၂)ကြိမ်လိမ်းပေးပါ။(၄)မျက်စိနဲ့နီးတဲ့နေရာဆိုလျှင်မျက်စိထဲမ၀င်အောင်သတိထားပါ။ (၅)ညပိုင်းအိပ်ခါနီးမှာမျက်နှာကိုရေနွေးနွေးလေးနဲ့သန့်စင်ပြီးသနပ်ခါးအမြှစ်ကိုသွေးလိမ်းပြီးအိပ်ပါ။ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဒီဆေးနည်းကိုကိုယ်တိုင်ရောသူငယ်ချင်းများပါလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းခဲ့၍တဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်လည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်းပြန် Shareပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ခရေက်ဒစ်စောနွဲ့ နေဆိုင်(ပူတာအို)ကျန်းမာရေးသတင်းများ Unicode ငါးရကျအတှငျးပှေးညှငျးတငျးတိတျဝကျခွံသကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့နညျး ငါးရကျအတှငျးပှေးညှငျးတငျးတိတျဝကျခွံသကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့နညျးပှေး၊ညှငျး၊ဝကျခွံ၊တငျးတိတျမြားအတှကျအလှယျဆုံးနညျး(ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ) ပှေး၊ညှငျး၊တငျးတိတျ၊ဝကျခွံဖုမြားအတှကျအလှနျရိုးရှငျးလှယျကူပွီးတဈပတျအတှငျးမှာပြောကျကငျးသှားစမေညျ့မွနျမာ့ရိုးရာလိမျဆေးနညျးလေးကိုရေးသားမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ (၁)ကွကျသှနျနီတဈလုံးကိုအခှံခှါပွီးရမေဆေးပဲထုထောငျးပါ။ဘရနျဒါကွိတျစကျရှိကကွိတျပါ။(၂)ကွှပေုဂံတဈလုံးထဲထညျ့ပါ၊သံပုရာသီးတဈလုံးကိုညှဈထညျ့ပါ။ (၃)ပှေး၊ဝဲ၊ညှငျး၊ဝကျခွံ၊တငျးတိပျပေါကျတဲ့နရောပျေါကိုတဈနေ့(၂)ကွိမျလိမျးပေးပါ။(၄)မကျြစိနဲ့နီးတဲ့နရောဆိုလြှငျမကျြစိထဲမဝငျအောငျသတိထားပါ။ (၅)ညပိုငျးအိပျခါနီးမှာမကျြနှာကိုရနှေေးနှေးလေးနဲ့သနျ့စငျပွီးသနပျခါးအမွှဈကိုသှေးလိမျးပွီးအိပျပါ။ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ဒီဆေးနညျးကိုကိုယျတိုငျရောသူငယျခငျြးမြားပါလကျတှစေ့မျးသပျပွီးတဈပတျအတှငျးပြောကျကငျးခဲ့၍တဆငျ့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ သငျလညျးလကျတှလေု့ပျကွညျ့ပွီးအဆငျပွတေယျဆိုရငျသငျ့မိတျဆှမြေားကိုလညျးပွနျ Shareပေးဖို့ မမနေဲ့နျော။ခရကျေဒဈစောနှဲ့နဆေိုငျ(ပူတာအို)ကနျြးမာရေးသတငျးမြား
လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ
လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ ကိုယ်တွေ သဘောကျ ရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက အတော မသတ် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့ လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ချစ်ပြီး အစစအရာရာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထား ခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေများ လာတဲ့အခါ ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ် လိုက်ကြတာ ပါပဲ ။ ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထပ်ကြသေးလဲလို့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာ ဦးမှာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း မကွဲချင်ပါဘူး။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့သူနဲ့ပဲ သက်ဆုံးတိုင် … Read more
လက်သည်းခွံ အရောင်ကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး
လကျသညျးခှံ အရောငျကနေ သိနိုငျတဲ့ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး မိနျးကလေးတှရေဲ့ထူးခွားတဲ့ အလှပတှထေဲမှာ လကျသညျးအလှပကလညျး ကိုယျခန်ဒာအစိတျပိုငျးတှထေဲမှာ အရေးပါဆုံး အရာတဈခုဖွဈလာတယျ။ လကျသညျးအရောငျတှေ က သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးနဲ့ ဘယျလိုမြိုးပကျသတျနလေဲ? လကျသညျးခှံအရောငျဖွူဖြော့ခွငျး သူ့အရောငျက ဖွူဖြော့ပွီး ပနျးရောငျအနညျးငယျသနျးသလိုလိုရှိလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးသတိထားရမှာကတော့ ဆီးခြိူရောဂါ , နှလုံး နဲ့ ကြောကျကပျ အသညျး ရောဂါတို့အဖွဈမြားတတျကွပါတယျ။ သူတို့တှကေ သှေးအားနညျးတယျ။ သံဓာတျခြို့တဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ သှေးအားကောငျးအောငျ အစားသောကျစားဖို့လိုအပျပါတယျ။ လကျသညျးခှံ နီညိုရောငျ ဖွဈခွငျး လကျသညျးခှံအရောငျက နီသလိုလို ညိုသလိုလို ရှိနမေယျဆိုရငျ သူက နှလုံးရောဂါသခြောပေါကျ ခံစားနရေမှာဖွဈတယျ။ ဒါ့အပွငျ လကျသညျးခှံအောကျမှာ အဖွူရောငျ စကျဝိုငျးခုံးလေးလို လကျသညျးပှငျ့ရှိနမေယျဆိုရငျတော့ အရပွေားရောဂါ ဖွဈနိုငျတယျ။ လကျသညျးခှံအရောငျဝါခွငျး လကျသညျးခှံအရောငျဝါတတျတာကတော့သကျကွီးပိုငျးတှအေဖွဈမြားကွပါတယျ။ လကျသညျးခှံဝါနပွေီးတော့ လကျသညျးခှံကအလိုလိုကှဲလာမယျ။ ဘာကွောငျ့ … Read more
“ဗိုက်ပူပြီး လေမလည်ရသူတွေအတွက် ဆေးနည်း”
“ဗိုက်ပူပြီး လေမလည်ရသူတွေအတွက် ဆေးနည်း” လေပွ(ဗိုက်ပွ) ပြီး မအီမသာဖြစ်နေပါက ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နုလေးများကို အသုံးပြုပါ။ ( #ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကို မစိမ်ခင်ရေသေခြာဆေးပါ ) ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နုလေးတွေကို ရေသန့်သန့်ထဲမှာ ထည့်စိမ်ပါ။ တစ်နာရီ စိမ်ထား‌‌ပေးက ပို၍‌‌ကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ အရေးပေါ်သုံးလိုပါ က နာရီဝက် အ နည်းဆုံး စိမ်ထားပေးပြီး သောက်ပေးပါက သက်သာ‌ ပျောက်ကင်း စေပါသည်။ ဗိုက်ဖောင်းနေသူတွေအတွက် ၎င်း အရွက်နုများကို ကြိတ်ပြီး ပူနွေးစေရန် မီးဖြင့် အပူသင့်ရုံပေးပြီး ဝမ်းဗိုက်ကို ကျပ်စည်းပေးပါ။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း လေပွခြင်း သက်သာပြီး ဝမ်းပျော့ပျော့ သွားပါလိမ့်မည်။ #ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်အကြမ်း လက်တစ်ဆုပ်ကို ထန်းလျှက်သုံးခဲနှင့်ကြိုပြီး ၁၀ ရက်ခန့် သောက်ပေးပါက အသည်းရောဂါသမားများ ပျောက်ကင်းသူများရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ။ … Read more
ဆှမျးမပို့တဲ့ရှာ( မွပွေနျ့ဒသေတှမှောတော့ ဆှမျးကှမျးကိစ်စအတှကျကို ဒကာဒကာမတှကေ တာဝနျယူကွတာဟာ တာဝနျတဈရပျလိုကို ဖွဈနပေါပွီ
ဆှမျးမပို့တဲ့ရှာ( မွပွေနျ့ဒသေတှမှောတော့ ဆှမျးကှမျးကိစ်စအတှကျကို ဒကာဒကာမတှကေ တာဝနျယူကွတာဟာ တာဝနျတဈရပျလိုကို ဖွဈနပေါပွီ ဗုဒ်ဓဘာသာရှာမှနျရငျ ဘုနျးတျောကွီးတှရေဲ့ ဆှမျးကှမျးကိစ်စအတှကျကို ဒကာဒကာမတှကေ ဆှမျးပို့ပေးပွီး တာဝနျယူကွတာဟာ မွပွေနျ့ဒသေတှမှောတော့ ဓလထေုံ့းစံတဈခု၊ တာဝနျတဈရပျလိုကို ဖွဈနပေါပွီ။ ခငျြးပွညျနယျက တဈခြို့သော ရှာလေးတှမှောတော့ မွပွေနျ့က သာသနာလာပွုတဲ့ ရဟနျးတှဟော ဆှမျးကှမျးအတှကျကို ကိုယျတိုငျခကျြပွီး ဘုဉျးပေးကွရပါတယျ။ ဒါကလညျး ခငျြးပွညျနယျမှာ သာသနာပွုတာဝနျကတြဲ့ ရဟနျးတျောတှအေတှကျ အထူးအဆနျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျးရဲ့ မွို့တှဖွေဈတဲ့ ကနျပကျလကျမွို့နယျထဲမှာဆို သာသနာပွုဌာနပေါငျး (၃၆)ဌာနရှိပွီး မငျးတပျမွို့နယျထဲမှာဆိုရငျ ဌာနပေါငျး (၅၀)ကြျော ရှိပါတယျ။ ကနျပကျလကျမွို့နယျထဲမှာ ဒသေခံ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှကေ ဆှမျးပို့တဲ့ရှာပေါငျး (၂၀)လောကျရှိပွီး မငျးတပျမွို့နယျထဲမှာလညျး ကြောငျးပေါငျး(၂၀)လောကျရှိပါတယျ။ ဆှမျးမပို့လို့ ကိုယျတိုငျခကျြဘုဉျးပေးရတဲ့ ရှာတှကေတော့ နှဈမွို့နယျပေါငျး (၅၀)ကြျော ရှိတာမို့ အဲဒီရှာတှမှော … Read more
မိသားစုအကွောငျးတှေ ပွနျတှေး ရငျး တူလေးအတှကျ စာတဈစောငျရေးသားလိုကျတဲ့ မိတျကပျ ညီညီမောငျ
ညီညီမောင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ပျော်နေတတ်သလို ပရိသတ်အတွက်လည်း ပျော်စရာတွေအမြဲဖန်တီးပေးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်လာရတဲ့အထိ ပရိသတ်အားပေးမှု ရလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း နေ့စဉ်မရိုးနိုင်အောင် ပျော်စရာတွေ မျှဝေပေးနေသူ သုသုကတော့ ဒီနေ့မှာ မိသားစုကိစ္စတချို့ကို ရင်ဖွင့်ရင်း ပရဟိတလုပ်နေတဲ့တူလေးအတွက် ရေးသားထားတဲ့စာတစ်စောင်ကို မျှဝေလာပါတယ်။ တူလေး ဆီရေးတဲ့စာ…. အမေ တို့ ညီအမ နှစ်ယောက် က သားတယောက်စီမွေးတယ်တစ်ယောက်က ယောကျာ်း… တစ်ယောက်က gay…. အကို ဝမ်းကွဲဆိုပေမယ့် မောင်နှမ အရင်းတွေလိုပါပဲ (အခုထိတော့မတည့်ဘူး) မတည့်တာမမေးနဲ့ အဖြေတွေကရင်ထဲမှာ.. ယောင်းမ ဆရာမလုပ်ပြီးစာသင်တဲ့ငွေနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် သားကြီးက ရိုးရိုးအောင် ဆယ်တန်း,သမီးငယ်က (၄) ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ ဆယ်တန်းဒီနှစ်အောင် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မရှိမဲ့ … Read more
ကတိတွေပေးပြီး မတည်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ကတိစကား(၇)မျိုး
အချစ်ရေးမှာ မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးတွေဆီကနေ ကတိတွေအမျိုးမျိုးတောင်းတတ်ကြပြီး ယောကျာ်းလေးတွေကလည်း ကတိတွေအများကြီးပေးကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ကတိတွေဘယ်လောက်ပေးပေး တချို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတိတွေကိုတော့ များသောအားဖြင့်မတည်နိုင်ကြတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုပေးပေမယ့် တည်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့ ကတိတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) သဝန်မတိုပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ စုံတွဲတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဝန်တိုပြီးချုပ်ချယ်တာတွေကြောင့်ပါ။ သင်ကအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်လို့ သင့်ချစ်သူကိုသဝန်မတိုဖို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော အဲ့ဒီကတိကိုတည်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကိုယ့်ချစ်သူက တခြားယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ရောနေတာကို မြင်ရရင် မနာလိုဝန်တိုစိတ်မဖြစ်တဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။သေချာပေါက် သဝန်တိုမှာပါ။ တကယ်လို့ သူ့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါသဘောထားကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုမချစ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ (၂) တခြားမိန်းကလေးတွေကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ ဒါကလည်း တည်နိုင်ဖို့ သိပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကတိပါ။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က ချစ်သူရှိရက်နဲ့ဖြစ်စေ၊ ချစ်သူမရှိတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ တခြားမိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့စိတ် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်အလိုမလိုက်ဘဲ ချစ်သူအပေါ်သစ္စာစောင့်သိတဲ့သူနဲ့၊ သစ္စာဖောက်တဲ့သူပဲ ကွာသွားတာပါ။ … Read more
မကျြနှာကို ရခေဲပှတျခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး ( ၆ ) ခု
မကျြနှာကို ရခေဲပှတျခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး ၆ ခု မကျြနှာကို ရခေဲပှတျခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး ၆ ခကျြ မကျြနှာကို ကုသပုံ ကုသနညျး အမြိုးမြိုး ရှိသညျ့အနကျမှ ဒီတဈခါ မှာတော့ ရခေဲဖွငျ့ ကုသနညျးလေးကို တငျပွပေး လိုကျပါတယျ ဒီနညျးလေးဟာ လူတိုငျးလညျး အလှယျတကူ လုပျနိုငျပွီး အခြိနျနှငျ့ ငှလေညျး မြားစှာ မကုနျစတေဲ့ နညျးလေးပငျဖွဈပါတယျ လိုအပျတာ ကတော့ ရခေဲတုံးပငျ ဖွဈပါတယျ (၁) အသားအရညျကို ကွညျလငျစနေိုငျပါတယျ ရခေဲတုံးဖွငျ့ မကျြနှာကို ပှတျတိုကျပေးခွငျး အားဖွငျ့ သှေးလညျပတျမူကို အထောကျ အကူပွုစမှော ဖွဈပွီး မကျြနှာကို သိသိသာသာ ကွညျလငျ လာစမှော ဖွဈပါတယျ။ (၂) မကျြနှာပျေါမှ အရာမြားကို … Read more
← Previous Page1 … Page186 Page187 Page188 … Page204 Next →
ခဈြပွီဆိုရငျ အမြိုးသားတှေ လိုခငျြတဲ့ အရာ (၆) ခု
အမြိုးသားတှစှေဲလမျးတတျကွတဲ့ အမြိုးသမီးတယောကျဆီက အပွုအမူ နဲ့ အကွငျနာဝမြှေမှုတှေ…
သူတို့တကယျခဈြမိသှားတဲ့ မိနျးကလေးကို ဒီလိုလုပျပေးတယျဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့
ကောငျလေးတှသေူတို့ခဈြသူဆီက သိပျလိုခငျြကွတဲ့ ထိတှမှေု့ပုံစံ (၉) မြိုး
လကျမထပျခငျ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့အတူ လုပျဖူးထားသငျ့တဲ့ အရာ (၄) ခု…
ခဈြသူက အရမျးခဈြမှနျးသိလို့ ဆိုးနတေဲ့ကောငျမလေးတှမှော ဒီလိုအခကျြ (၅) ခကျြရှိပါတယျ
ကောငျလေးဘကျက သငျ့ကိုအတညျတှဲနမှေနျး သိသာနတေဲ့ လက်ခဏာမြား…
© 2021 Thuta Music • Built with GeneratePress